Randomized fanandramana afaka endriny maro ary azo ampiasaina mba handalina maro karazana fitondran-tena. Fa amin'ny ny fototra, randomized fanandramana efa efatra lehibe sakafo: fandraisana ny mpandray anjara, randomization ny fitsaboana, fanaterana ny fitsaboana, sy ny fandrefesana ny vokatra. Ny taona nomerika dia tsy manova ny fototra maha-fanandramana, fa izany no mora kokoa ho azy ireo logistically. Ohatra, tany aloha dia mety ho sarotra ny handrefesana ny fitondran-tena ny olona an-tapitrisany, fa izay zatra mitranga ankehitriny ao amin'ny rafitra nomerika maro. Mpikaroka izay afaka mahatakatra ny fomba hitrandrahana ireo fahafahana vaovao ho afaka hihazakazaka fanandramana izay azo teo aloha.
Mba hanao izany bebe kokoa rehetra mivaingana-na inona no nijanona ny mitovy ary inona no niova-aoka ny mandinika Michael Restivo sy Arnout van de Rijt ny (2012) . Ny mpikaroka te hahatakatra ny vokatry ny tsy ara-potoana mpiara valisoa amin'ny famoahana fandraisana anjara amin'ny Wikipedia. Indrindra indrindra, dia nianatra ny vokatry ny barnstars, loka hisy Wikipedian afaka manome hafa Wikipedian mba manaiky asa mafy sy noho ny zotom-po. Restivo sy van de Rijt nanome barnstars ny 100 mendrika Wikipedians. Avy eo, Restivo sy van de Rijt fanarahan'ny ny mpandray 'manaraka fandraisana anjara ny Wikipedia nandritra ny 90 andro manaraka. Akory ny hagagan ', ny olona izay nomena barnstars niandry mba ho vitsy kokoa ny fanovana rehefa avy nandray ny iray. Amin'ny teny hafa, ny barnstars toa ho nanakivy fa tsy mampahery anjara biriky.
Soa ihany Restivo sy van de Rijt dia tsy mihazakazaka ny "perturb sy mitandrina" andrana; dia nihazakazaka ny randomized voafehy fanandramana. Noho izany, ankoatry ny fisafidianana mpandray anjara 100 ambony mba handray ny barnstar, izy ireo koa dia naka 100 ambony mpandray anjara izay tsy manome barnstar. Ireo zato nanompo toy ny fanaraha-maso ny vondrona, ary izay nahazo barnstar sy izay tsy tapa-kevitra tsapaka. Rehefa Restivo sy van de Rijt nijery ny fanaraha-maso ny vondrona dia nahita fa nanana mideza indray mitete amin'ny fanomezana koa. Farany, raha oharina ny olona ny mpikaroka ao amin'ny vondrona fitsaboana (izany hoe, nahazo barnstars) sy ny olona ao amin'ny fanaraha-maso ny vondrona, dia hita fa nahatonga ny barnstar mpamoaka lahatsoratra handray anjara tokony ho 60% intsony. Nefa, izany fitomboan'ny fanomezana dia mitranga ho ampahany amin'ny ankapobeny fitotonganan'ny amin'ny vondrona roa.
Araka ny fandinihana ity mampiseho, ny fanaraha-maso ny vondrona ao amin'ny fanandramana zava-dehibe amin'ny fomba izay somary paradoxical. Mba mazava handrefesana ny vokatry ny barnstars, Restivo ary Van der Rijt nila hitandrina ny olona izay tsy nandray barnstars. Matetika mpikaroka izay tsy zatra amin'ny fanandramana tsy mankasitraka ny mampino ny fanaraha-maso ilaina ny vondrona. Raha Restivo sy van de Rijt tsy manana fanaraha-maso ny vondrona, dia ho voasariky ny diso hevitra mihitsy. Control vondrona dia tena zava-dehibe fa ny Tale Jeneralin'ny orinasa lehibe iray Casino efa nilaza fa misy fomba telo ihany fa ny mpiasa azo noroahina avy amin'ny orinasa: halatra, ara-nofo, ary nihazakazaka ny fanandramana tsy misy fanaraha-maso ny vondrona (Schrage 2011) .
Restivo sy van de Rijt ny fianarana maneho ny efatra lehibe sakafo ny fanandramana: fandraisana mpiasa, randomization, fidirana an-tsehatry, ary ny vokatra. Miara, ireo sakafo efatra mamela ny mpahay siansa mba hifindra mihoatra correlations ka refeso ny causal vokatry ny fitsaboana. Manokana, randomization dia midika fa rehefa mampitaha ny vokatra ho amin'ny fitsaboana sy ny fanaraha-maso ny vondrona no hahazo ny tombana ny causal vokatra izany fidirana an-tsehatra noho izany napetraka ny mpandray anjara. Amin'ny teny hafa, amin'ny randomized mifehy fanandramana azonao antoka fa misy fahasamihafana eo amin'ny vokatra no vokatry ny fidirana an-tsehatra sy tsy confounder, ny filazana fa ho marina eo amin'ny ara-teknika Tovana mampiasa ny mety ho vokatra rafitra.
Ankoatra ny maha-mahafinaritra fanoharana momba ny Milina ny andrana, Restivo sy van de Rijt ny fianarana ihany koa dia mampiseho fa ny fitaovana nomerika andrana dia mety ho samy hafa tanteraka amin'ny Analog fanandramana. Tamin'ny Restivo sy van de Rijt ny andrana, dia mora ny hanome ny barnstar ny olona eto amin'izao tontolo izao ary izany dia mora ny manara-maso ny vokatra-isan'ny fanovana-mahery ny fotoana maharitra ny fotoana (satria Ovay tantaram-dia mandeha ho azy ao amin'ny Wikipedia). Izany fahafahana hamonjy fitsaboana ka refeso vokatra amin'ny resaka hatsarana tsy misy vola dia tsy toy ny fanandramana tamin'ny lasa. Na dia izany fanandramana anjara 200 olona, ​​mety efa niara-nihazakazaka tamin'ny 2000 na 20.000 ny olona. Ny tena zava-manakana ny mpikaroka avy amin'ny scaling ka ny andrana amin'ny alalan'ny toe-javatra ny 100 tsy lafo, izany etika. Izany hoe, Restivo sy van de Rijt Tsy te hanome barnstars ho tsy mendrika izy ireo mpamoaka lahatsoratra sy ny tsy tiany ny fanandramana mba hanakorontana ny Wikipedia vondrom-piarahamonina (Restivo and Rijt 2012; Restivo and Rijt 2014) . Noho izany, na dia ny fanandramana ny Restivo sy van de Rijt dia somary tsotra, dia mazava tsara fa ny zavatra sasany momba ny fanandramana efa nijanona toy izany koa ary ny sasany efa niova. Indrindra indrindra, ny fototra lojika ny fanandramana dia tsy miova, fa ny fitaovana efa niova. Manaraka, mba mazava kokoa mitokantokana ny fahafahana namorona izany fiovana, aho mampitaha ny fanandramana izay mpikaroka atao izao ny karazana andrana izay efa natao tamin'ny lasa.